Noma ubani othemba ukuthola isithombe esihle, uzama ukulandela ukushintshashintsha kwesisindo sakhe. Lokhu kulula kakhulu uma wazi ubukhulu besisindo somzimba ojwayelekile ngokukhula okuthile. Uma wazi ukuthi isisindo esivamile senyuke ngamasentimitha angu-165 (170, njll) kufanele kube, kulula kakhulu ukuzilawula futhi ungabi kude kakhulu nokulahlekelwa isisindo. Phela, ukwehlisa ngokweqile noma isisindo somzimba obukhulu kungabangela ukulimala okungenakuqhathaniswa kwezempilo.
Amafrimu ahlongozwa kanjani?
Kumele kuqashelwe ngokushesha ukuthi izinkomba zesisindo esivamile umuntu oyedwa angakwazi
Ahluke kulabo abanye, ngisho noma ukukhula kwabo kufana nhlobo. Indima ebalulekile ekunqumeni imingcele yesisindo idlalwa ubulili. Kubantu, izisindo ziwumyalelo wokuphakama okukhulu kunabesifazane. Lokhu kungenxa yobuqili besakhiwo somzimba wesilisa, okungukuthi, ukuqina kwamathambo. Isibonelo, isisindo esivamile nokuphakama kuka-170 cm owesifazane cishe cishe ngu-55-60 kg, futhi kumuntu izindinganiso zesisindo sokukhula okufanayo zisuka ku-63 kuya ku-67 kg. Yikuphi ibha lokunamathela, okungenani noma okuphezulu, ukhetho lomuntu ngamunye. Le mingcele ihlelwa odokotela futhi inqume lezo zinkomba lapho umzimba uzomuzwa khona.
Indlela elula yokubala isisindo esivamile
Indlela elula yokuthola isisindo esivamile nokukhula komuntu othize yi-formula elandelayo: kusukela esilinganisweni sokukhula kuthatha ikhulu namkha umehluko owamukelwe, thatha enye i-10% yamadoda namaphesenti angu-15 kwabesifazane. Leli fomula lithathwe yi-Anthropologist ongumFulentshi uPaul Brock. Idatha ifana kakhulu, kodwa kungenzeka ukulinganisa imingcele ngalendlela.
Ngokuvamile, ifomula ifanele abantu abanezinga eliphakeme lokukhula. Ngaphezu kwalokho, le ndlela ayibonisi ukusatshalaliswa kwesisindo salo. Ngisho nasezingeni elijwayelekile, umuntu angaba nemilenze egcwele noma ezinye izingxenye zomzimba. Uma ubala isisindo esihle , izici eziningi kufanele zithathwe ku-akhawunti ezingathinta umphumela wokugcina. Ngakho-ke, ezinye izindlela eziningana zokunquma izisindo zomzimba ezivamile zakhiwe, okuyiqiniso kakhulu.
Inkomba yomzimba womzimba (BMI)
Lesi sibonakaliso satholwa yisazi sezenhlalo seBelgium Adolf Kjutl. Kusasetshenziselwa ukwelashwa nemidlalo, nakuba sekuyisikhathi eside kufakazelwe ukuthi le ndlela ayiyona impela ngokunembile. Ifomula yokubala inkomba yomzimba womzimba kanje.
BMI = Isisindo (kg) / ukuphakama 2 (m)
Umphumela uyinombolo yezinombolo ezimbili, enezincazelo zayo ezivela kwi-World Health Organization. Uma inkomba ishintsha phakathi kuka-18.5-25, isisindo sithathwa njengokujwayelekile futhi asibeka engozini yezempilo. Izinkomba ze-BMI ebangeni 25-30 zikhombisa isisindo somzimba esiningi. Uma isibalo esitholiwe sidlula uphawu lwama-30, lokhu kubonisa izinga elithile lokukhuluphala. Kumele uqaphele ukuthi izinkomba ezingaphansi kwe-18.5 zingakhuluma ngokuntuleka kwesisindo somzimba, okwenzelwe owesifazane imiphumela emibi kuze kube yilapho engakwazi ukukhulelwa. Emadodeni, isisindo esincane singabuye sibe nomthelela omubi.
Ukulungiswa kwifomula ye-BMI
Inkomba yomzimba yomzimba ibonisa iqiniso kuphela uma kwenzeka ukuphakama okuphakathi nokwakhiwa okujwayelekile. Okusho ukuthi isisindo esivamile ngokuphakama kuka-168 cm womuntu kule fomula singabalwa, kepha uma siphansi, isibalo esitholiwe kufanele sithathwe esinye se-10%. Kuyafana nakwabesifazane abangaphansi kuka-154 cm.
Kulabo besifazane abangaphezu kuka-174 cm namadoda, okukhula kwawo okungaphezu kuka-188 cm, umphumela wokubala isisindo esivamile ngokwemigomo engenhla kuzodinga ukulungiswa. Kulokhu, u-10% wengezwa kukhombisi etholakalayo. Ukulungiswa kwefomula kwenezelwe kakade ekusebenziseni, lapho kuvele ukuthi abantu abakhula ngenhla noma ngaphansi kwesilinganiso, imiphumela ayithembekile.
Isibonelo sokubala isisindo esivamile nge-formula BMI
Ake sicabangele indlela yokubala isisindo esivamile ngokunyuka kwama-180 cm. Ngalokhu, sithatha indawo yokukhula komkhawulo kanye nemingcele yenkomba yomzimba womzimba ku-formula ye-BMI . Umphumela uwukuthi:
18.5 (25) = X / 3.24, lapho i-X isisindo esivamile ngokukhula kwe-1.80 m.
Ngezibalo ezilula, sithola ukuthi imingcele ye-mass evamile ekukhuleni okunikeziwe yi-60-81 kg. Kulaba besifazane, udinga ukungeza u-10% kulesi sibalo bese uthola ububanzi obungama-66-89 kg. Kumele kuqashelwe ukuthi lezi yizinkomba zezokwelapha zesisindo esivamile, ezingasongela impilo yabantu. Ukuze uzizwe ukhululekile futhi ucabange kahle esibukweni, abanye abantu kudingeka balwele uphawu oluphansi noma oluphezulu. Isibonelo, insizwa encane enempilo ukuphakama kuka-180 cm, isisindo samakhilogremu angu-60 kubhekwa njengephansi kodwa asibulali.
Izinto ezithinta i-BMI
Izinto eziningi zithinta isisindo esivamile ngokukhula kwe-1.60 m (nanoma yikuphi okunye). Isibonelo, kucatshangwa ukuthi uma uneminyaka yobudala, inkomba ye-BMI ingakhula, futhi isibalo - sihlale singavamile.
Futhi kucatshangelwa indlela yomuntu yokuphila. Kubantu abagijimi, le nkomba ayibonisi isithombe sangempela, ngoba imisipha ibaluleke kakhulu kunamafutha. Futhi kubonakala ukuthi umuntu osebenza ngokugcwele emdlalweni wezemidlalo unemoto engaphezu kwezingu-30. Nakuba eqinisweni, akakwazi ukuba nawo amakhilogremu engeziwe, futhi i-BMI ayikhombisi izinga lokukhuluphala, kodwa isisindo somzimba we-muscle.
Umthethosisekelo udlala indima ebalulekile ekunqumeni izinyathelo ezijwayelekile zesisindo. Isibonelo, isisindo esivamile ngokuphakama kwesifazane esingu-175 cm cishe ngu-60 kg. Lesi sibalo singakhuliswa ngokuphepha ngekhilogram emihlanu kwabesifazane abanamathambo avulekile. Umsebenzi we-model uhilela umzimba nge-bone encane. Isisindo samabhlodi asiqabukeli ngaphezu kwekhilomitha ezingama-50, futhi ukukhula kwawo akufanele kube ngaphansi kuka-175 cm. Ngokuvamile isifiso sokusondela ezinhlotsheni ezinjalo siholela ekhatheni komzimba.
Ukungahambi ngendlela ye-BMI
Impendulo eyinhloko yale nqubo ingedatha eseduze kakhulu emzimbeni wesisindo somzimba. Futhi ukusebenzisa i-BMI ayikwazi ukuthola isisindo sesisindo sabesifazane abakhulelwe nabantwana abakhulelwe. Isilinganiso sokuphakama nesisindo somzimba enganeni asifani nomuntu omdala, ngakho-ke nazo zonke izinguquko zokukhula ezingaphansi kwe-164 cm, ifomula ayikwazi ukusetshenziswa.
Isisindo esivamile esilinganiselwa ku-160 cm ngokwe-formula BMI singafinyelela ku-64 kg, kodwa yini eyamukelekayo ngokwemithi umuntu omdala eyamukelekayo kwengane ingaba yingozi. Ngaphezu kokukhula kwikhombisi yesisindo esivamile somntwana, ubudala bakhe kufanele bucatshangelwe.
Ezinye izindlela zokunquma isisindo sesisindo
Enkambeni yokusebenzisa i-index mass mass, kwacaca ukuthi lesi sibalo asikhombisi isibalo esihle. Okutholakele kubonisa isisindo esivamile kuphela endaweni yokubukwa kwezokwelapha, kepha ngokukhula okufanayo nesisindo, umuntu oyedwa angase abuke njengento encane futhi encane, kanti enye - egcwele futhi ekhululekile. Kuncike kumaphesenti amafutha emzimbeni we-mass total kanye nokusatshalaliswa kwawo kuwo wonke umzimba. Isibonelo, isisindo esivamile nokuphakama kuka-170 cm womuntu wezemidlalo kungaba yi-kilogram ngezinye eziyishumi ngaphezu kwalowo ohola impilo yokuphila.
Ukunquma ukuthi amaphesenti amafutha emzimbeni asebenzisa amasu ambalwa anamuhla, kodwa amabili kuphela asakazeke. Indlela yokuqala iwukuthi ukushayela okwamanje okuncane kudluliselwa emzimbeni. Isilinganiso sokuhamba kwe-pulse yamanje ngokusebenzisa izingqimba zamafutha kuncane kakhulu kunezinsizwa namathambo. Futhi amafutha amaningi, kancane kancane isibonakaliso siya. Le ndlela isakazekile ngenxa yobulungisa bayo, kepha kuze kube yamuva nje itholakale ezikhungweni zezokwelapha, ngoba imishini yobuchwepheshe eyinkimbinkimbi isetshenzisiwe. Manje ungenza lesi silinganiso ngisho nasekhaya ngosizo lwezikali, ezibandakanya umsebenzi onjalo.
Indlela yesibili ihlanganisa ukulinganisa i-fat gauging device ngosizo lomuntu osebenzayo, ezingxenyeni ezihlukene zomzimba. Idatha etholakalayo ngokuqhathaniswa iqhathaniswa namatafula athuthukile futhi izinga lokukhuluphala libalwe. Idivayisi ye-elekthronikhi yokulinganisa okunjalo ibizwa ngokuthi i-caliper. Ihlaziya ngokuzenzakalelayo idatha etholakele futhi ngokushesha ikhipha umphumela. Inzuzo yale ndlela yindlela ukubonakala kwe-caliper, okuthatha isikhala esincane kakhulu. Njengokwesimo sokuqala, ngosizo lwayo ungenza izilinganiso futhi ubale isisindo esivamile ngokukhula kwe-165 cm noma enye.
Isibhedlela saseMorozovskaya. I-Polyclinic yesibhedlela saseMorozovskaya
Sun Life: elikhanyayo Svetlana igama. Imvelaphi Nenjongo